Wasiirka Beeraha iyo Jaaliyadda Narway | WWW.SOMALILAND.NO
Wasiirka Beeraha iyo Jaaliyadda Narway
Posted on Janaayo 27, 2008 by weriye1
Oslo (somaliland.no) Maalintii Axadii ee bisha koowaad ahayd 13-ka waxa Magaaladda Oslo ka dhacay shir ay ku kulmeen jaaliyadda Oslo iyo wasiirka Beeraha. Waxa hadalo uu wasiirka ku soo dhaweynayo ku furay Guddoomiyaha Jaaliyadda Xusseen Aadan Cadib. Intaa kadib Safiirka Somaliland ee Norway Mudane Maxamed Adan Liilan ayaa Hadalkii la wareegay soo dhaweynta wasiirka ka dib wuxu si balaadhan uga waramay waxqabadka jaaliyadda, Xafiiska safaaradda iyo guulaha ay soo hoysay siyaasadda arimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland. Siiba isbedelka siyaasadeed ee uu muujiyey safarkan weftiga Madaxweynuhu. Waxa kaloo uu ka dhawaajiyey in dalkii uu maalgashi badan oo malaayiin dollar ahi galayo taasoo khaasatan ka tageysa Dalkan Norway. Waxaanu tusaale u soo qaatay hawshan sahaminta macdanta, biyaha iyo batroolkaba leh ee ay sameynayaan Diyaaradaha iyo Maraakiibtuba.
Waxa iyana hadalo soo dhaweyn ah halkaa ka yidhi wakiilada Xisbiyadda mucaaradka ah ee Kulmiye iyo Ucid mudane Axmed Baaruud iyo mudane Cali Cidin. Intaa ka dib waxa hadalkii la wareegay Wasiirka Beeraha Mudane Aadan Dhoolayare. Hadallo mahadnaq ah oo uu u jeediyey jaaliyadda, safiirka iyo guddoomiyaha cusub ee jaaliyadda ka dib wuxu ku bilaabay kolay war iskuma keen seegana oo dunidu maanta waa “Global Village” wax walibana waa “Online” oo idinkaa dadka dalkii joogga uga xog-ogaalsan oo wax idinka qarsooni ma jiro. kolkaa wax cusub idinku soo kordhinmaayo. Fariintan idiin soo gudbinayaa waxa weeye waxad la socotaan in badan ayeynu isku dayeynay ama dhaliil xukuumada ha loogu jeediyo ama inaguba aynu isku canaanano kaasoo waajib ku ah qof kasta oo reer sl. ah inuu huro dhaqaalihiisa iyo naftiisaba si aynu u gaadhno xuduudka somaliland oo ah ta qaranimadeena muujineysa. Ilaahay mahadii waa la gaadhay waad la socotaan. Laakiin ciidan iyo dad meel iskama jooggi karaan hadaanay taakuleyn helin. Kolkaa sidad la socotaan waxa la sameeyey guddi uu madaxweyne ku xigeenku guddoomiye u yahay kana kooban dhamaan golayaasha qaranka iyo xisbiyaddaba. Waxa loo xil saaray ururinta gudo iyo dibadba dhaqaalihii Goboladii Sool iyo Sanaag bari dib loogu dhisi lahaa si loo soo gaadhsiiyo intay ka hadheen gobolada kale ee dalka.
Haddaba, ka jaaliyad ahaan waxa idiin iman doona wafti uu hogaaminayo nin xil dhibaana oo Kulmiye ah oo loo soo xil saaray arintaa. Waxa la idinka doonayaa sidii lagu yiqiin jaaliyadda norway ee ay uga tilmaaneyd jaaliyadaha kale ee dunida inaad u diyaar garowdaan oo aad si balaadhan uga qeyb qaadataan taakuleyntaa ciidanka iyo dib u dhiska gobalada bari.
Weftiga madaxweynuhu wuxu ku soo beegmay xili ay wax badani iska bedeleen Geeska Afrika, oo ah Soomaaliyaddii hore oo aan dawladi ka jirin, Kiiniya oo liiqliiqaneysa iyo Itoobiya oo dab badani ku shidan yahay. Caalamkuna waa maslaxad waa isii aan ku siiyee, nina isagoo iska fadhiya malqacad afka looma geliyo. Kolkaa waxaynu soo gaadhnay xilligii dunidu wax inala qabsan laheyd.
Kulankaa wasiirku wuxuu ku soo gabagaboobay su´aalo jaaliyadu wax ka weydiisay wasiirka xukuumadu ka tirsan yahay iyo guud ahaan dalkaba.
Filed under: Norge |
« Utanriksministeren sitt svar på eit skriftleg spørsmål frå representanten Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) om Somaliland Guddoomiyaha Baarlamaanka SL oo ka codsaday Dawladda Norway inay ka kabto xagga miisaaniyadda Dawladda SL »